အကောင်းဆုံး Android ဖုန်းများ - စမ်းသပ်မှုများ၊ Androidsis
Android ပေါ်ရှိစျေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နိုင်သည့်မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်များအကြောင်းသင်သိလိုပါသလား။ မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုသင်ရှာနေသလား၊ ပိုကောင်းသောရွေးချယ်ရန်သတင်းအချက်အလက်ရှိလိုပါသလား။ ဤတွင် Android တွင်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သောမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်၎င်းတို့အကြောင်းကိုပိုမိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ပိုမိုသိရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စျေးကွက်ရှိအဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအပြင်စတိုးဆိုင်များသို့ရောက်လာသည့်ထုတ်လုပ်သူအသစ်များမှ Android ဖုန်းအမျိုးအစားအားလုံး၏သတင်းများ၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ။ ဤအမျိုးအစားတွင်သင် Android ဖုန်းများနှင့်သင်သိလိုသမျှကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ ဒီသတင်းများကိုမလွတ်သွားစေပါနဲ့
မည်သည့် Android ဖုန်းကို ၀ ယ်ရမည်နည်း။
10 ၏ထိပ်တန်းမိုဘိုင်း 2017
စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်း ၁၀ လုံး
ယူရို ၃၀၀ အောက်ဖုန်းများ
ယူရို ၂၀၀ ထက်မပိုသောအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းများ
ယူရို ၁၀၀ အောက်တရုတ်ဖုန်းများ
Android One နှင့်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းများ
အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့် Android ဖုန်းများ
သင်၏နောက် Android မိုဘိုင်း၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါကအောက်ပါစာရင်းတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Android မိုဘိုင်းကုမ္ပဏီများ၏နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်ထုတ်လွှင့်ချက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဤရွေ့ကား Android ဖုန်းများနှင့်ပတ်သက်။ အများဆုံးကိုယ်စားပြုထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Google ရဲ့ mobile operating system အသုံးပြုသူတွေကြားမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးသူတွေပေါ့။
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့ 40 စက္ကန့် .
Huawei ha anunciado hoy por fin los dos nuevos smartphones de la serie P50. Serán dos buques insignias por el…
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့7horas .
Xiaomi သည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်စျေးကွက်တွင်စမတ်ဖုန်းသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Poco X3 GT ဖြစ်သည်။
Redmi Note 10T, Redmi Note 10 5G ကဲ့သို့မိုဘိုင်းဖုန်း၊
Xiaomi သည် Redmi Note 10T အဖြစ်ရောက်ရှိလာသည့်အလယ်အလတ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် terminal အသစ်ကိုဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အရှေ့ ...
Realme Narzo 30 5G နှင့် Realme GT 5G နှိုင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်ချက်
အာရှထုတ်လုပ်သူ Realme ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအရေးအပါဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးမတူညီသောမော်ဒယ်များကိုစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးသည်
Prime Day - သင်အားသာချက်ယူနိုင်ဆဲဖြစ်သောမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်စမတ်နာရီများနှင့်ဈေးဝယ်ခြင်း
Amazon Prime Day 2021 သည်အခြားသူများစွာတွင်နည်းပညာ၊ အိမ်နှင့်အိမ်သုံးအလိုအလျောက်များ၊
Poco M3 Pro၊ Redmi Note 10S နှင့် Redmi Note 10 Pro တို့ကိုတွန်းလှန်။ မရနိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ရောင်းချသည်
Play Store တွင်အမှားကုဒ်နံပါတ် ၉၁၀ ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
ပြီးပြည့်စုံသောလည်ပတ်မှုစနစ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုမရှိပါ။ 100% လုံခြုံစိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုစနစ်လည်းမရှိပါ။ လည်ပတ်မှုစနစ်အားလုံးသည်ထိခိုက်နိုင်သည်။
Poco M3 Pro ကိုဒီစျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးပရိုမိုးရှင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရယူပါ
Pocophone သည်စျေးကွက်အတွင်းထုတ်ကုန်များစွာဖြင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာပြီး ...
ကင်မရာကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့ဖုန်းကိုသင်ရှာနေတယ်ဆိုရင်၊ Cubot X50 ကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့
ထိပ်တန်းကင်မရာစမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော Cubot X50 သည်ယနေ့တွင်ယနေ့တွင်ရောင်းချတော့မည်ဖြစ်သည်။
Cubot X50: 64 MP quad ကင်မရာစမတ်ဖုန်းကိုတတ်နိုင်သမျှစျေးနှုန်းဖြင့်
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ယနေ့ကောင်းသောကင်မရာရှိရန်အရေးကြီးသည်။ စမတ်ဖုန်းကင်မရာကသိပ်မများပေမယ့် ...
ZTE Axon9Pro တွင်တရားဝင်: ၆.၂၁ လက်မ AMOLED, Snapdragon 6.21, Android 845 Oreo နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
BQ Aquaris C ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ HD + display၊ Snapdragon 425, Android 8.1 Oreo နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
အတည်ပြုသည် - ZTE သည်လာမည့်သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်တွင် Axon9ကိုတင်ပြမည်
Sony Xperia XA3 Plus သည် Geekbench တွင်ပေါ်လာသည်
Moto P30 ၏ပထမဆုံးပြန်ဆိုမှုကိုစစ်ထုတ်သည်